“In Xuduudeen-na ay madaxda Soomaaliya timaado fawdo ayay keenaysaa imika”… Cali Jaamac Buureed | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“In Xuduudeen-na ay madaxda Soomaaliya timaado fawdo ayay keenaysaa imika”… Cali Jaamac Buureed
Hargeysa (SDWO): Wasiirkii hore ee Wasaaradda Kalluumaysiga Cali Maxamuud Jaamac (Buureed), ayaa ka digay inay Soomaaliya ku soo gudubto xadka iyo xuduuda Somaliland, isla ay xukuumadda cusub awoodda saarta sidii loo sugi lahaa xuduudka.
Xilli wasiirka ka tirsan Soomaaliya, uu yimid Somaliland, gaar ahaan Sanaag Barri, oo uu ka soo jeedo, waxaanu Xukuumadda kula taliyey inay waajibaadkeeda ka gudato, oo ay awoodo saarto sidii aan looga soo xad gudbi lahayn Xaduudaha Somaliland.
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Kaluumaysiga Cali Maxamuud Jaamac (Buureed), oo u waramay Wargeyska Geeska Afrika ayaa ugu horeyn yidhi “In Xuduudeen-na ay Madaxda Soomaaliya timaado, fawdo ayay keenaysaa. Imika dawlad baa jirta, ee dawladda cusub ee dhalatay cida masuul uga ah waa inay awooda saarto sidii loo sugi lahaa xaduudaha Somaliland si aan loogu soo xad gudbin ayaa muhiim ah”.
“Madaxda Somaliya waxaan leeyahay xadkiina ku eekada, oo ka dheerada wixii keenaya foodo iyo dhibaato, Xukuumaddii hore haddan Wasiir ka ahaa, hadda Shacab baan ahay, balse taladdaydu waa yaan xadkeena iyo xuduudeena marnaba lagu soo xad gudbin” Cali Buureed.